प्रशासनिक सुधारमा चुनौती – Sourya Online
प्रशासनिक सुधारमा चुनौती
सौर्य अनलाइन २०७६ भदौ २२ गते ७:५८ मा प्रकाशित
मुलुकमा शासनसत्ता नै परिवर्तन हुादा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारीप्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।
विश्वलाई अवलोकन गर्ने हो भने सन् १९८० र १९९० को दशकमा विभित्र नवीन अवधारणाको उदय भएको देखिन्छ । यसको साथै विश्वमा सुशासन र प्रशासन सुधारका लागि अघि सारिएका मान्यताले पारदर्शी, जवाफदेही, उद्यमशील, छरितो र नतिजामूलक निजामती प्रशासनको वकालत गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यसैलाई स्वीकार गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सोही अनुरूप ढाल्ने प्रयत्न भएका थिए । देशमा भने विसं २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् विसं २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको थियो । यसै वेलादेखि नै निजामती प्रशासनमा सुधारका विभित्र अभियान प्रारम्भ भएका थिए । पहिलो प्रयास विसं २००९ को बुच कमिसन हो भने विसं २०१३ मा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा अर्को कमिसन गठन भयो, जसले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै विसं ०२५ र विसं ०३२ मा छुट्टै आयोग गठन गरी निजामती सेवामा सुधारका प्रयास भएको देखिन्छ । हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २२ मा विभित्र कार्यव्रmमको आयोजना गरी निजामती कर्मचारी दिवस मनाइन्छ । यसरी देश चलाउन प्रशासन चाहिन्छ अनि सरकारी रूपमा नियुक्त प्रशासकहरू हुन्छन् । ०६२ सालबाट यस दिवसको सुरुवात भएको थियो, वास्तवमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यस दिवस मनाउन थालिएको थियो ।
विश्वव्यापीकरणसँगै विश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन । नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्र्नुपर्छ । वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्तिविकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा शासन सत्ता नै परिवर्तन हँुदा पनि आम कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । आफ्नो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसले गर्दा जनतामा निजामती कर्मचारीस प्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन ।
देशमा राजनीतिक संव्रmमण अन्त्य भई दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भइसकेको अवस्था छ । यस्तो समयमा पनि कर्मचारीहरू सरकारले खटाएको स्थानमा नजाने कुराहरू बारम्बार अखबारहरूमा पढ्न पाइन्छ । यसमा कर्मचारीहरूमा वितृष्णा के कुराले हुन गइरहेको छ त्यो कुराको स्पष्ट रूपमा पत्ता लगाउनु पर्ने देखिन्छ । जनताले तिरेको कर खाएर जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवाप्रदान गरिनुपर्दछ । जबकि हाल विभिन्न क्षेत्रहरूमा कर्मचारीहरू नभएको जनगुनासो सुनिने गरिन्छ । यस्ता किसिमका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई वेलैमा निराकरण गर्नको लागि युद्धस्तरमा सरकारले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा वेलावेलामा विभित्र खाले प्रशासनिक समस्या देखापर्ने गर्छन् । हाल नेपालमा निजामती कर्मचारीको संख्या झन्डै ८० हजार छ ।
तर, दुर्गम जिल्ला तथा कम अतिरिक्त आम्दानी हुने क्षेत्रमा निजामती कर्मचारी जानै चाहँदैनन् । दुर्गम भेगका सेवाग्राही कर्मचारी अभावका कारण सधैँ मर्कामा पर्दै आएका छन् । दुर्गममा स्वास्थ्य सम्बद्ध कर्मचारीको अभावमा हरेक दिनजसो बिरामीको मुत्यु हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाएर मात्र राज्यको आर्थिक भार कम हुँदैन । राज्यले निजामती कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिँदै जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । तिनलाई आफ्नो पेसामा व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीमा व्याप्त कामचोर प्रवृित्त, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दलको झोले बनेर तलब सुविधा खाने मनोवृित्तमा लगाम नलागेसम्म सेवाग्राही मर्कामा परिरहने छन् । र, खराबलाई हदैसम्मको सजाय अनि असल कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न सक्दा मात्रै निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद बढाउनुको औचित्य पुष्टि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र अझै बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । हालको बलियो सरकारको समयमा पनि संक्रमणको समयमा जस्तो कामकाजलाई पन्छाउने र भोलि गरौँला भत्रे प्रवृित्त प्रशासकमा हाबी भएको देखिन्छ ।
यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य हुनु नितान्त जरुरी भइसकेको छ । अझै खरो भाषामा भन्नुपर्दा संक्रमणकाल जस्तै हालको परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा पनि बरालिन थालेको देखिन्छ । यसरी कर्मचारीहरू कामकाजबाट पन्छने प्रवृित्त प्रशासन सुधारका लागि अवरोधक बनेको छ । उच्च प्रशासकसमेत राजनीतिक नेतृत्वको आदेश पालक र एस म्यान बत्रे गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । मन्त्री बनेर आउने राजनीतिक नेताले ऐन नियम विपरीत काम गर्न प्रशासकलाई दबाब दिए पनि प्रशासकले त्यस्तो काम सरासर गर्ने प्रवृित्त छ । यसको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ । उच्च प्रशासकले कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई ऐन–नियमबारे ब्रिफिङ गरी कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । ऐन–नियम विपरीत काम गर्दा त्यसले पार्ने दुष्प्रभाव र असरबारे मन्त्रीलाई जानकारी गराउन सके पक्कै उनीहरू पनि सहमत हुन्छन् । प्रशासकहरू मन्त्रीको एसम्यान बनेर जस्तोसुकै काम पनि गरिदिने प्रवृित्तको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि प्रशासक पनि आपसी विवाद र वैमनश्य त्यागेर एकजुट हुँदै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा देशको स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन । हिन्दुस्तानबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनको व्यक्तिगत सहयोगीसमेतको भूमिका निर्वाह गर्न आएका गोविन्द नारायणदेखि हालका काशीराज दाहालजीसम्म आइपुग्दा थुप्रै समितिहरू, आयोगहरू गठन भइसकेका छन् । व्यक्तिगत तवरमा विज्ञहरूद्वारा गराइने अध्ययन अनुसन्धानमा प्रतिवर्ष थुप्रै रकम राज्यले खर्चिएको छ । तसर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा जस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । त्यसैले मौलाउँदो भ्रष्टचार प्रशासनिक क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । माथिल्लो निकायबाट भ्रष्टचार गर्नु हुँदैन भनी प्रतिबद्धता जाहेर गरिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।
भ्रष्ट प्रवृित्तको खुलेर विरोध गर्ने परम्परा बसिसकेको छैन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कर्मचारीले अभियान चलाउन सकिरहेका छैनन् । बरु मौन स्वीकृति प्रदान गरिरहेजस्तो देखिन्छ । यस्तो प्रवृित्तको अन्त्य नहँुदासम्म जनताले सरकारी स्तरबाट सेवा­सुविधा सरल रूपमा पाउन सक्दैनन् भने प्रशासनिक सुधारसमेत अघि बढ्न सक्दैन । अतः प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै साबित हुन्छ । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पुरस्कार दिनुपर्छ र ऐन–नियमविपरीत काम गर्नेलाई तत्काल दण्ड दिनुपर्ने परम्पराको थालनी गर्नुपर्छ । चाकडी चाप्लुसीका भरमा पुरस्कृत गर्ने परम्परालाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । कामचोर तथा भ्रष्ट प्रवृित्त भएकालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । तसर्थ निजामती प्रशासन भित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
हलो जुवा र नियाँ
नेकपाको एकतासंयोगान्त कि, वियोगान्त ?
घरमै बसी पढ्ने शैक्षिक पद्धति
व्याज घटाउने प्रतिस्पर्धा
मणि थापाको कम्युनिस्ट निष्ठा
नेपाली नेताहरूले केही सिकेनन्, नेल्सन मण्डेलाबाट
हाललाई देशभर लकडाउन हुँदैनः मन्त्री खतिवडा
सुशान्तको खाताबाट ५० करोड निकालियो
संघर्षले नै बलिउडमा टिकेकी हुँः करिना
पशुपति र रमिलाको तिज गीत सार्वजनिक
कोरोनाबाट सजग रहन आग्रह
मदन पुरस्कारको मनोनयनमा ७ पुस्तक
सीमानाका सिल हुँदा पनि रोकिएन तस्करी
निर्मलाको परिवारले न्याय पाउने कहिले ?
छायाँनाथामा बाह्रै महिना दर्शन गर्न पाइँने
कालोपुलमा मोटरसाइकल दुर्घटना, एकको मृत्यु